Samachar Batika || News from Nepal » स’म्भोगअघि महिला-पुरूषले जान्नुपर्ने १० कुरा !
स’म्भोगअघि महिला-पुरूषले जान्नुपर्ने १० कुरा !
हाम्रो सामाजमा यौ’न जीवनलाई खुल्ला राखिएको छैन तर, मानिसका लागि यौ’न आधारभूत आवश्यक्ता हो । मानव जीवनको अनिवार्य आवश्यक्ताको रुपमा रहेको यौ’न जीवनलाई सहज र सफल कसरी बनाउने भन्ने कुराबारे सचेत बन्याै भने याै’न जीवनमात्र नभइ समग्र दाम्पत्य जीवन नै सफल हुन्छ ।
–स’म्भोगका बेला जोडीको मूडलाई ध्यानमा राख्नुहोस् । यदि जोडीको मुड खराब छ भने माया र स्पर्शले पहिले उसको मुडलाई सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् तर स’म्भोगका लागि जोडी तयार नहुँदै कर गर्नु राम्रो हुँदैन ।
–सम्भो’गका बेला एक–अर्कामा शारी’रिक एवं मा’नसिक रूपले बढी भन्दा बढी नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस् ।
–यौ’नस’म्पर्कका बेला हरेक कुरालाई ग’म्भीर रूपले लिनु हुँदैन । अन्तरंग पलहरूलाई सधै ख्यालठट्टाको रूपमा लिनु उचित हुन्छ।
–स’म्भोगका विषयमा मनमा केही शं*का भएमा पहिले त्यसलाई हटाएर मात्र स’म्भोगको सिलसिला अघि बढाउनुपर्छ ।
–सम्भो’गका दौरान जोडीको सन्तुष्टिको ख्याल गर्नुहोस् ।
– पर्याप्त आ’नन्द लिनका लागि तपाईं शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । त्यसैले सधैं व्यायाम र सन्तुलित भोजन ग्रहण गरी तन्दुरुस्त रहनु राम्रो मानिन्छ ।
–सम्भो’गका बेला पा’क्क्रीडामा बढि जोड दिनुहोस् । यसले जोडीलाई बढी च’रमसुख प्राप्त हुन्छ ।
–स’म्भोगलाई निरन्तरता दिनुहोस् । स’म्भोगमा धेरै अन्तराल राख्नु राम्रो होइन ।
–स’म्भोगका बेला आफ्नो जोडीको प्रशंसा गर्न नभुल्नुहोला ।
मानिसका लागि यौ’न आधारभूत आवश्यक्ता हो । मानव जीवनको अनिवार्य आवश्यक्ताको रुपमा रहेको यौ’न जीवनलाई सहज र सफल कसरी बनाउने भन्ने कुराबारे सचेत बन्याै भने याै’न जीवनमात्र नभइ समग्र दाम्पत्य जीवन नै सफल हुन्छ ।
प्रकाशित मिति २१ असार २०७७, आईतवार १६:१८